Nanapa-kevitra ny hampiorina ny fizahantany amin'ny kaontinanta ireo minisitry ny fizahantany afrikanina
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Nanapa-kevitra ny hampiorina ny fizahantany amin'ny kaontinanta ireo minisitry ny fizahantany afrikanina
Birao fizahantany afrikanina • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao Mafana Namibia • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Ireo minisitra afrikanina tamin'ny alàlan'ny fihaonamben'ny UNWTO dia nanome toky fa hiasa miaraka ireo fanjakana afrikanina mpikambana mba hamorona fitantarana vaovao momba ny fizahantany manerana ny kaontinanta.
Ireo mpikambana afrikanina UNWTO dia niray feo nanohana ny voady Windhoek tamin'ny fanolorana an'i Brand Africa.
Manaiky ny fiaraha-miasa ny minisitra afrikanina hitady vahaolana hamelomana indray ny fizahantany eto Afrika.
Araka ny voalazan'ny Windhoek Pledge, ny mpikambana dia handray anjara amin'ireo mpiantsehatra amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina ary ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana mba hanangana fitantarana vaovao manentana ny fanahy momba ny fizahan-tany manerana ny kaontinanta.
Nanaiky ny hiara-hiasa ny minisitra afrikanina hitady vahaolana hamelomana indray ny fizahan-tany any Afrika izay tsy tratry ny fiantraikan'ny COVID-19.
Nanao fanambarana ny minisitra ny alakamisy tao amin'ny kaominina iraisan'izy ireo tao amin'ny Fikambanan'ny Firenena Mikambana momba ny fizahantany manerantany (UNWTO) Fihaonana an-tampon'ny Brand Africa natao tao Windhoek, Namibia.
Ny fampanatenana dia natao mba hahatsapany tsara kokoa ny fahafahan'ny fizahan-tany hitaona ny fahasitranana, hoy izy ireo tamin'ny alàlan'ny kaomina iraisana.
"UNWTO sy ny mpikambana ao aminy koa dia hiara-hiasa amin'ny Vondrona afrikanina sy ny sehatra tsy miankina mba hampiroborobo ny kaontinanta ho an'ny mpihaino vaovao manerantany, fitantarana mifototra amin'ny olona ary fanamarihana mahomby," hoy ny UNWTO tao amin'ilay kaomina.
Miaraka amin'ny fizahan-tany ekena fa andry manan-danja amin'ny fampandrosoana maharitra sy iombonambe ho an'i Afrika, ny UNWTO dia niarahaba ireo solontena avo lenta tamin'ny Fihaonambem-paritra voalohany momba ny fanamafisana an'i Brand Africa.
Ny fihaonambe dia nanasongadina ny fandraisana anjaran'ny mpitarika politika ny firenena mpampiantrano Namibia, miaraka amin'ireo mpitarika ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina manerana ny kaontinanta.
Araka ny voalazan'ny Windhoek Pledge, ny mpikambana dia handray anjara amin'ireo mpiantsehatra amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina ary ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana mba hanangana fitantarana vaovao manaitra ny fizahantany manerana ny kaontinanta, hoy ny minisitra.
Ny fandaharan'asan'ny hetsika nataon'ny kaonferansa minisitry ny fizahantany afrikanina dia nahitana fampisehoana, fotoam-piresahana ifanakalozan-kevitra, ary koa fitsidihana teknika nokarakarain'ny Namibia Tourism Board izay nampiantrano ny hetsika.
Nahatratra tanjona lehibe dimy ny kaonferansa. Ny tanjona voalohany dia ny hampiasa ny fizahan-tany ho sehatry ny fiampitana misy fiatraikany lehibe amin'ny marika nasionaly sy isam-paritra, hanatsarana ny endrik'ireo toerana afrikanina ho toy ny vato manorina amin'ny endrika ankapobeny any Afrika.
Tanjona faharoa ny fampiroboroboana ny daholobe sy ireo sehatra tsy miankina ary koa ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana sy ireo ampielezana amin'ny fampiroboroboana ny tantara sy traikefa tsara momba an'i Afrika, ny fampiroboroboana ny synergie misy eo amin'ny firenena hanamafisana kokoa ny fametrahana ny kaontinanta.
Tanjona fahatelo ny hamorona sy hanatsara ny fahaizan'ny toerana itodiana sy ny fahaizany amin'ny fampandrosoana sy fitantanana marika, marketing, ao anatin'izany ny media sosialy sy ny fitantarana tantara ary ny fifandraisana mahomby.
Tanjona fahefatra ny hamoronana tantara manintona, hanatsara ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manao amin'ny orinasa madinidinika (SME).
Ny tanjona fahadimy dia ny fahafantarana ny rafitra politika napetraka mba hahazoan'ny SME antoka fampindramam-bola sy hanamorana ny fahazoana miditra amin'ny kapital sy ny fahombiazan'ny fandraharahana mandritra ny areti-mandringana COVID-19.